ukuqonda: uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-29 Disemba 2019	• 25 Comments
Ubunyani, njengoko kuchaziwe ngu-CEO weGoogle u-Ray Kurzweil, isendleleni kwaye iya kuqhubeka nenqanaba eliphakathi lokutshintsha kobuntu, apho ibhayoloji yakudala yabantu iza kuthathelwa indawo ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Izibonelelo sele zichaziwe ngomphumo wemozulu. Kanye njengokuba indawo yabanye ingena endaweni yenyama, […]
Kufakwe kuyo UKUBHALA, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	20 Julayi 2019	• 12 Comments
Le veki ingxoxo encinci yavela apha kwisayithi malunga nokuzalwa kwakhona kunye nombuzo wokuba loo nto ikhona. Ngokweengxoxo, bekuya kubakho ubungqina obaneleyo obuya kubonisa ukuba ukuphindukuzalwa kubakho. Iingcamango zam kukuba ingxoxo iyaba yinto enzulu xa ungena kwisona senyaniso [...]
Kufakwe kuyo UKUBHALA	by UMartin Vrijland	8 Julayi 2019	• 17 Comments
Kukunzima ukucinga, kodwa ngaba uyazibuza ukuba ngaba abanye abantu abasondelene nawe banayo 'umphefumlo'? Kuphela kufuneka ukhangelelene nawe kwimpilo yemihla ngemihla kwaye ngamanye amaxesha ufumana abantu abakwaziyo ukwenza inceba, kodwa ngokwenene [...]
Ngaphambili ndathumela kwividiyo evela kuRoald Boom, endiyaziyo mna, kodwa apho ndibukele ividiyo ye-YouTube ngaphambi kwe1x. Kwintetho engezantsi (endiyifumene nayo), uRoald uya kusondela kwintetho yam. Uthi isiphakamiso sika-Einstein 'Asinakuyicombulula ingxaki kwizinga elinye lokucinga' [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.368.575